Wakiilka Olivier Giroud oo ka hadlay Mustaqbalka Ciyaaryahanka ee Chelsea
Home Horyaalka Ingiriiska Wakiilka Olivier Giroud oo ka hadlay Mustaqbalka Ciyaaryahanka ee Chelsea
Olivier Giroud ayay ku adag tahay inuu helo waqti uu ku ciyaaro Chelsea. Haatan wakiilkiisa ayaa ka hadlay mustaqbalka weeraryahanka ee kooxda.
Olivier Giroud oo 34 jir ah ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay lala xiriirinayay kooxo badan.
West Ham, Lazio , Inter iyo Juventus ayaa lagu xamanayaa inay xiiseynayaan weeraryahankaan.
Giroud ayaa ah dookha seddexaad ee Chelsea madaama labada xidiga ee Timo Werner iyo Tammy Abraham ay ka horeeyaan.
Haatan wakiilkiisa Michael Manuello ayaa ka hadlaya mustaqbalka Giroud.
– Waa 34 sano jir haddii aysan xaaladda Chelsea wax iska beddelin wuu bixi doonaa, wuxuu doonayaa waqti inuu ciyaaro oo uu ku raaxeysto kubbadda cagta. Waa xilli hore in la sheego waxa la taaban karo iyo waxa kaliya ee xanta ah. Waan arki doonaa sida ay u egtahay bisha Diseembar, ka dib waxaan go’aan ka gaari doonnaa tallaabada xigta, ayuu Manuello u sheegay FootMercato.
– Ku noqoshada Ligue 1 ma ahan mudnaanta Olivier. Wuxuu doonayaa inuu la kulmo waxyaabo kale, wuxuu raadinayaa meel uu kaga raaxeysan karo kubadiisa. Himilada isaga u habboon waxay noqon laheyd inuu aado dibadda. Koox Premier League ka dhisan oo hami sare leh ayaa ka dhigi laheyd inuu mar kale ka fikiro. Laakiin muhiimadiisa ayaa ah inuu ka gudbo xuduudaha England.
Previous articleReal Madrid oo kula tartameysa Barcelona saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Georginio Wijnaldum
Next articleSky Sports oo Saadaalisay Kulamada Isbuuca 9aad Ee Premier League natiijadooda